Services - Security Cameras for Commercial & Residential
+95 1 515 104, +959443046008, +959443046009
Billion Bright Group Co ., Ltd Security Sale & Service
Billion Bright Security မှ CCTV Camera တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုများ
ခေတ်မှီတိုးတက်နေသော ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသစ်များစွာနဲ့ လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှူက အထူးအရေးပါရုံမက စိတ်ဝင်စားဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။
ယခု နိုင်ငံတကာမှာ CCTV Camera များနှင့်အတူ လုံခြုံရေးနည်းသစ်များ အသုံးပြုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ပြဿ နာအခက်အခဲများစွာကို ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း အကျိုးသာဓကများစွာ ရှိနေပါပြီ။
CCTV Camera များနှင့်အတူ Digital Video Recording System တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်
၂၄နာရီ အချိန်ပြည့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခြင်း၊
မှတ်တမ်းတင်ပြီးသော Video များကိုလည်း နေ့ရက် အချိန်အလိုက် အတိအကျ ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
ညအမှောင်များထဲတွင်လည်း ကောင်းစွာရိုက်ကူးနိုင်သော Infrared Camera များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊
Internet တပ်ဆင်ထားပါက မိမိတပ်ဆင်ထားသောနေရာမှ ပုံရိပ်များကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မည်သည့်နေရာမှမဆို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊
၀န်ထမ်းများ၏ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပုံများကို လိုက်လံကြပ်မတ်ရန်မလိုပဲ တစ်နေရာထဲမှ စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းတို့အပြင်
အခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Billion Bright Group Company မှ အခြားသော ၀န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် နေအိမ်၊ ခြံဝန်း၊ ရုံးခန်းမှစ၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ သိုလှောင်ရုံများ၊ Mini Mart, Super Market, Shopping Mall များ၊ Bank, Hotel, Motel များအားလုံးအတွက်
Service (1 year) Warranty
လိုအပ်သော Securiy အတွက် အကြံပေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း
တပ်ဆင်မည့် Camera Security System များနှင့် ပတ်သက်သော ကုန်ကျစရိတ်များကို သေသေချာချာ တွက်ချက်ပေးခြင်း
အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှ အချိန်တိုအတွင်း စိတ်တိုင်းကျသွားရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်း
အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် မိမိတပ်ဆင်ထားသော Camera နှင့် DVR အမျိုးအစား၊ အရေအတွက် အနည်းအများပေါ် မူတည်၍ ကုန်ကျစရိတ်အား အရစ်ကျပေးချေနိုင်ခြင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆိုရင် Billion Bright Group Company တွင် Access Control (Controller) Security ပစ္စည်းများကိုလည်း ရောင်းချပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံးတက်၊ ရုံးဆင်းချိန်များကို တိကျစွာမှတ်သားပြီး လွယ်ကူစွာနှင့် မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပေးနိုင်မည့် Finger Print Scanner (Free Software) , Time Card Machine
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်များကို ညဘက်များတွင် လူလုံးဝစောင့်ကြပ်ရန်မလိုပဲ တပါးသူ ဘေးအန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးအောင် အချက်ပြလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည့် Bagalar Alarm (Alarm Monitoring System)
Shopping Centre များ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အခြားသောနေရာများတွင် သတ္တုနှင့်သံထည်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ကို လုံခြုံမှု အပြည့်အ၀ပေးနိုင်မည့် လမ်းဖြတ်လျှောက်စက် (Walk Through), လက်ကိုင်ရှာဖွေစက် (Hand Metal Detector)
လူကြီးမင်းတို့ နေအိမ်၊ ရုံးခန်းအစရှိသောနေရာများ လုံခြုံစိတ်ချစေရန်အတွက် Wireless Intercom Video Door Phone (Hand Free Type)
မိမိသွားလားရောက်ရှိသည့်နေရာများကို အတိအကျ သိရှိစေနိုင်မည့် Transmitter & Receiver ပါဝင်သော Camera Wireless DVR Kit
ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့် သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး မိမိကြည့်ရှုလိုသည့်နေရာမှ ပုံရိပ်များကို ပြတ်သားစွာ တွေ့မြင်နိုင်သော Camera များ Wireless Camera Kit
Billion Bright provides services for CCTV cameras.
These days, new high technology and security playavital role in our society. High techs are now and interesting. We have observedalot of examples to get problems solved by installing CCTV Cameras and using new security techniques.
At CCTV Cameras are installed together with Digital Video Recording systems:
It will help recording images during 24-hour day.
Recorded video images can be seen on an exact time and dates.
During the night , Infrared Cameras can also be used.
If internet is available , the recorded images from these cameras can be observed from anywhere within Myanmar.
Inspection four is not necessary forasupervisor inamill or factory ; how workers are doing their jobs can be seen on the TV Screens.
and other advantages are readily available too.
Billion Bright Group Company provides services to homes.compounds and offices as well as mills, factories, warehouses, Minimart, Supermarkets, Shopping Malls, Banks, Hotels and Motels.
Services converge includes:
Advice for possible requirement for security through construction
Detailed calculations of expenditures for installation of Camera Security System
In case of emergency, expert knowledge is available inashort time to the satisfaction of our customers
Under special programmes, customers are allowed to pay under installment plan depending on the types and numbers of Cameras and DVRs. Access control (Controller ) security applications from Billion Bright Group Company are now on sale in Myanmar.
The rush hours of all employees are easily and correctly identified by means of installation of Finger Print Scanners (Free Software) and Time Card Machines.
Burglar Alarms ( Alarm Monitoring Systems ) can be installed to keep your workplace safe without employing might watchmen.
To detect metal and iron tools in Shopping Centers,mills and factories, walk through and Hand Metal detectors can be installed to keep all employees safe in these buildings.
Wireless intercom Video Door Phone ( Hand – free type ) is installed to keep your home and office safe and secured.
Camera Wireless DVR Kit which includes Transmitter and Receiver is installed to show the exact location you wish to go .
Wireless Camera Kit which includesalot of cameras is installed to show images on the screen ofahandy cordless phone clearly.
Best Franchises Opportunities are here!
No. 34(A), Inyarmyaing Street, Shwe Taunggar (2) Quarter, Bahan Township, Yangon, Myanmar
+95 1 515 104, +9594430 46008, +9594430 46009 , +951536595, +959323 667 94
+95 1 536 595